Trailer Shiinaha ganaax farsamo BPW warshad nooca iyo kuwa alaabada | Dada
guga caleen Car
Truck guga caleen
gaari xamuul culus guga caleen
Leaf ahaanayta guga
Leaf guga iyo qaybo ka mid for gaari waajib culus
Leaf guga joojinta hawada
Trailer ganaax farsamo BPW nooca
Sinotruk howo guga caleen bidix hore
caleen Trailer TRA guga 2726
Isticmaal: Qaybo Trailer
Qaybo: Hakinta Trailer
Max Payload: 16 metrik halkii dariiq dhexaad
Size: tixraac sawir
Iyo meesha Asal ahaan: Shandong, Shiinaha, Shandong, Shiinaha
Supply Kartida: 1000 Piece / Cadad per Month
Sida caadiga ah Waxaan u isticmaali sariirtaada packing.Place sheyga on sariirtaada ah, waxay ka aamin jiita ammaanka iyo maroojiyaan la film stretch, si loo sugo iyo in laga hortago dust.If aad leedahay baahiyo kale, waxaad astaysto oo waafaqsan shuruudaha aad.
Buuxiyey oo ku sariirtaada la xuub biyuhu
Lead Waqtiga: 30 maalmood
Maxaad Waxaan Ma Isticmaalka Leaf Springs for culus Baabuurta?
guga caleen A, ama guga qaadee ah, waa nooca fudud ee guga sida caadiga ah looga faa'iideysan baabuurta taayir leh. Sidoo kale, waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn ee durdur ah ee Musefeni. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah guga caleen badan guga si joogto ah, taas oo ah helical, waa in dhammaadka guga caleen ee laga yaabo in lagu hagaajin jidka gaar ah. ilo Leaf baabuurta culus la hagaajin karin in ay ku yiilleen, ama waxay si toos ah go'an kartaa mid ka mid ah dhamaadka, iyadoo frontage caadi go'an iyada oo loo marayo xidho a, taas oo ah cudud Escuardo yar. xidho wuxuu qaadanayaa ilaa rabitaan ee guga caleen si dheeraaday haddii Tifaftirayaasha. Taasina waxay keentaa in springiness u jilcincy.
Markii uu u bedelo ilo caleen
Marka aad nadiifinta qaybo ganaax kuwan, tani sidoo kale waa markii ugu fiican si aad u hubiso iyo arko haddii ay u baahan yihiin in la bedelo. Qaado aragti dhaw at gu 'kasta iyo u aragto haddii ay muujinaysa calaamadaha soo socda:
guga A caleen in ay si weyn u sasabato ka badan kuwa kale - Tani waxay badanaa ka dhigan tahay in aad baabuur leedahay laabto a fahmayaan labada bidix ama dhinaca midig. Haddii SAG waa weyn ama waa mid aad u cad, bedelo guga caleen duugoobay sida ugu dhaqsaha badan.
Jab guga - Dildilaaca ama jab aan la welded kartaa, si aad u leeyihiin in ay helaan guga cusub haddii mid ka mid hore ah oo muujinaya calaamadahaan.
Si ba'an u hardware mirdheen - musmaarradii celiyaan, nuts, iyo u-geliyeen handarraabbadeedii xira gu 'kasta waa in ay ahaataa lacag la'aan ah ka miridhku. Haddii aan meelahakan ayaa soo bandhigeysa daxalka u daran, waxa la joogaa wakhtigii inay maalgashi ku ilo cusub.
laga yaabaa Hadda waxaad la jirrabay in la soo celiyo ilo si xun u burburay naftaada. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha run ahaantii talinayaa tan iyo hawsha aad u adag tahay, waqti lumis, iyo waxay u baahan tahay qalab gaar ah. bet Your ugu fiican noqon lahayd in aynu a inaanu xirfad makaanik aad u duugoobay ama waxyeello ilo.
Previous: ilo caleen trailer Semi for BPW, nooca FUWA
Next: Leaf guga joojinta hawada
Noocyada kala duwan ee Leaf Spring
Z Nooca Leaf Spring
Z-Nooca Air Spring
gaari Semi guga caleen
caleen Trailer TRA guga 3319
ilo caleen trailer Semi for BPW, nooca FUWA
Ma og qaybaha ugu muhiimsan ee sh aad ...
Dooro dhumucda guga caleen!
Waa maxay saxan il?
Lixin Town Degmada Gangcheng, Jinan, Shandong, Shiinaha